﻿ अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त दुई सहकारीबिचको मर्जमा किन देखियो विवाद ?
अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त दुई सहकारीबिचको मर्जमा किन देखियो विवाद ?
शुक्रबार ०२, साउन २०७७
इटहरी । सहकारीहरुलाई मर्जको लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । सोअनुसार विभिन्न् ठाउँका सहकारीहरु एक अर्कोमा गाभिने वा मर्ज हुने क्रम चलिरहेको छ ।
यस्तैमा इटहरीस्थित महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पथरीमा रहेको मनकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिचको मर्ज भने सहकारीका सदस्यहरुको कारण अवरुद्ध बनेको छ । दुवै संस्थाभित्रका सदस्यहरुको रिसइवीले मर्ज अवरुद्ध बनेको हो । प्रक्रिया नपुर्याइ सहकारी मर्ज गरेको भन्दै दुवै संस्थाका केही शेयरसदस्यहरुले उजुरी दिएपछि तत्कालका लागि मर्ज प्रक्रिया नै स्थगित बनेको छ ।
९ हजार शेयर सदस्य रहेको इटहरीको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ६ हजार शेयर सदस्य रहेको मनकामना मर्ज हुने अन्तीम अवस्थामा त्यहाँका सदस्यहरुले विवाद झिकेका हुन् । शेयर सदस्यहरु सँग छलफल नै नगरि मर्ज गर्न लागिएको उनीहरुको आरोप छ ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रर कार्यालय, सहकारी महासंघ, सहकारी संघमा उजुरी परेको हो । महिला बचतको नाम निशान नै मेटाउने गरि निर्णय गरिएकाले संस्था जोगाउनका लागि निवेदन दिन बाध्य भएको सहकारीकी पूर्व अध्यक्ष गीता श्रेष्ठले बताइन् । उनले महिला बचतको इतिहास मेट्न नहुने बताइन् ।
उता पथरीको मनकामनाका शेयर सदस्यहरुले पनि मर्ज प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् । साधारणसभा बोलाएर मात्र सहकारी एकिकरण गर्न शेयर सदस्यहरुले माग गरेका छन् ।
यता महिला बचतकी अध्यक्ष अमृता सुब्बाले सहकारी मर्ज गर्नुको विकल्प नभएको बताएकी छिन् । सरकारको नीतिअनुसार नै सहकारी मर्ज गर्न लागेको बताउँदै केहि सदस्यहरुले आन्तरिक स्वार्थका कारण विवाद झिकेको बताइन् ।
ठूलो बचत संकलन तथा लगानीका साथ बैङ्कहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तहमा पुगेका सहकारीहरुलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मर्जमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मर्जको लागि सञ्चालक समितिलाई साधारणसभाबाट म्याण्डेड प्राप्त रहेको बताइन् । उनले यसअघि दुई वटा सहकारीहरु महिला बचतमा मर्ज भइसकेको जानकारी बताइन् ।
महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था महिलाहरुले व्यवस्थापन गरेको देशकै नमुना सहकारी हो । यसले एसियाली ऋण महासंघबाट एक्सेस ब्रोन्ज अवार्ड प्राप्त गरेको छ । उता मनकामना पनि सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको सहकारी भएको र दुवै सहकारीको मर्जले सुनसरी र मोरंगमा अझ धेरै विश्वसनीय सहकारी स्थापना गर्न सकिने सुब्बाले बताइन् ।
उनले आफ्नो संस्थाको भन्दा पनि मनकामनाभित्रको विवादका कारण मर्ज रोकिएको बताइन् । उनले महिला बचतभित्रको विवाद भन्दै सार्वजनिक भएका विना दस्तखतका पत्रको पछि लाग्न नसकिने बताइन् ।
ृउनले संस्थाको बाहिर बसेर संस्थाको प्रगती नचाहनेहरुले खेदो खनेको आरोप लगाइन् । ‘एक समय महिला बचतलाई डुबाउनै लागिपरेकाहरुले बाहिर बसेर अनेक नाममा होहल्ला फैलाएका छन्,’ उनले भनिनु् ।
उनले संस्थाको नामबारे साधारणसभाले टुंगो गर्ने बताउँदै तत्कालको लागि एउटाको विधान र विनियमलाई मानेर जानुपर्ने नियम रहेको बताइन् । उनले नाम भन्दा पनि व्यवस्थापन प्रमुख रहेको बताइन् ।
‘महिला बचतको स्थापनाको योजना सबै मैले बनाएकी हुँ, नामको माया सबैभन्दा बढी त मलाई छ,’ महिला बचतको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी सुब्बाले भनिन्, ‘तर संस्थाको सबलीकरण मुख्य कुरा हो, नाम त साधारणसभाले पछि टुंगो लगाउँछ ।’
अबको परिस्थितिमा सहकारी एकीकरण अपरिहार्य भएको महसुस हामी सहकारी कर्मि मात्रै नभई राज्यको पनि भएकोहुँदा तपाईंहरुकाे यश अभियानमा साथ छौं ।एकता अभियानमा भाँजो हाल्नु भनेकाे सहकारी ठुलो नहाेस् भन्ने कलुसित भावना हाे ।कलुसित भावना मुर्दावाद ।
ए .... अमृता सुब्बा एकलैले महिला बचत खडा गरेको रैछ है ...? अरुले डुबाउन आटेको सस्था हैन अहिले अमृता सुब्बा आफैले सत्यनास बनाइ सके पछि सस्था को नाम निसाना हराउने गरि अरु सङग टासिनु जानू पर्ने ???? मर्ज के हो कसरी गर्ने मर्ज किन गर्ने था नभएको हो र अहिलेको सहकारी ऐन ले पनि भनेकै छ नि .... तर ... महिला बचत को सधारण सभाले नामै तोकेर मनकामना साकोस सङ्ग मर्ज गर्ने निर्णय कहिले गर्यो ??? सोझो सिदा महिला सदस्य हरुलाइ गुमराह मा राख्ने ??? एक्लै जे पनि गर्दा हुन्छ ?? आफ्नै को भाडा तिर्ने , आफ्नै कम्पनी को सम्पत्ति देखाएर लगानी गर्ने ? अनि कस्ले चै सस्था डुबाउन खोजेको रैछ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ .... धन्न मर्ज पोस्ट्पोन्ड भएको समाचार ल्याएछ .... धन्यवाद Newslaya.com लाई 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 जय सहकारी ।
सबैखाले पथभ्रष्ट निर्णय र नियुक्ती सदस्यको विरोधले रोकिन गाह्रो । मूल नेतृत्वले लाज,सरम र घीन सबैथोक पचाएकोले । यो बुझ्नुहोस दुबै सहकारिका संचालकहरु ले ! किनकि सहकारि बिनियम, सेवा र कार्य क्षेत्र बिर्सिएर केन्दिय राजनिति सहकारिमा नलाद्नुहोस ! मनकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पथरी शनिश्चरे–१, मोरङले संस्थाको इटहरीमा रहेको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा एकीकरण हुनेकुरा बजारमा आएपछि बुझ्दै जाँदा सिमित केहि ब्यक्तिहरुको स्वार्थको लागि हाम्रो पथरिको ईतिहास बोकेको २०५४ साल देखिको मनकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लाई साधरण सभाको म्यान्डेड भन्दा बाहिर गई उक्त्त ईटहरिमा मर्ज हुन लागेको संस्थामा केन्द्रीय कार्यालय रहने र अध्यक्ष समेत मुख्य कार्यकारि पोस्टहरु त्यहि संस्थालाई जिम्मा गर्ने गरि मर्ज गर्ने खोजिएको कुरा पुर्ण जानकारिमा आयो ! गुणात्मक सेवाका लागि सहकारी मर्ज हुनुको विकल्प छैन ।सहकारी मर्ज हुँदा फाइदा हुने भनेको सहकारीलाई नै हो । तर हाम्रो सहकारिको बिनियममा सेवा क्षेत्र भित्र भन्दा बाहिर गएर मर्ज गराउन खोज्नु , पुर्ण सदस्यहरु लाई जानकारि बिना, र ११ सदस्यिय संचालक समितिका बहुमत सदस्यहरुको असमत हुदा हुदै अध्यक्ष लगायत एकाध ब्यक्तिको जोडमा यस्तो कार्य गर्नु गराउनु उचित कदम हो जस्तो लाग्दैन मलाई ! मेरो यस प्रति घोर आपत्तिका साथ साथै बहुसंख्यक सदस्यको तर्फबाट चेतावनि सहितको ध्यानाकर्षण पनि भएको जानकारि अबगत गराउदछु ! एकीकरणका लागि चाहिने मुख्य कुरा साधारणसभा हो । सभाले पास गरेर मात्रै एकीकरणका लागि जान सकिन्छ भन्दै यस तर्फ पाईला बढाउनेलाई जानकारि गराउन चाहन्छु अनि सबै यस संस्थाका शेयर सदस्यलाई यस बिषयमा चासो लिन र सरोकार राखन हुन अनुरोध गर्दछु ! २०५४ सालमा स्थापना भएको मनकानाको परिच्छेद १ को प्रारम्भिक २ मा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । कार्यक्षेत्रमा भनिएको छ ‘‘संस्थाको कार्यक्षेत्र मोरङ जिल्ला न.पा. र गा. वि. स. को क्षेत्रभित्र सीमित रहनेछ।” यसर्थ पनि मनकामना सुनसरी केन्द्रिय कार्यालय रहेको महिला साकोस संग एकीकरण हुन सक्दैन ।